IMISA MIDAB LEH AYAAD TAHAY?! – CABDILLAAHI RAAGE ~SAYYIDKA~
IMISA MIDAB LEH AYAAD TAHAY?!
SAYYIDKA October 31, 2015 December 28, 2017 QORMOOYIN, TALO
-Hebel/Hebli waa ayo?!
Labadaa su’aalood ruux aan la waydiin soomaali maaha..!!!!
Galab dheer ayuu wadaadku la taagnaa waadaad kale oo saxiibkii ah iskuna koox ay yihiin markuu baabuur lalaaya oo siigada ka muuqataa kuu sheegayso in uu hawl adag oo dheer ku jiro ku garab bakhtiiyay wadaadka inaadeerkii, salaanba intaan la iswaydaarsana ku bilaabay waar reer hebel miyaanad ahayn?!!
-Haa haduu afkiisa ka soo saarayna waxaba uu ugu daray oo maxaa ninka reer hebel kula taagay?!!!
-Hadaad wadaad doontahay ma waxaad wayday wadaad reerkeena ah oo aad la saaxiibto?!!
Maba ogoba in labada wadaad qabyaalad kale ka dhaxayso.
Dhacdadaasi maaha malo awaal iyo wax uu nin maandilaacsaday curiyay, waxay ka dhacday meel aan aqaan waxayna ku dhacaday rag aan aqaan…!!!
Bal an ka dhex baxno jawiga abtirsiga…
-Heesaha nooceed dhagaysataa?!!!
-Aad baad qadiimi u tahaye..!!! Qaraamiyaa..??!!
-Waar kuwan danbe ma fanbay hayaan..??!!!
-Wax ay soo minguursheen iyo wax aan dhan uu ka socdo iyo dhan uu u socdo la garanayn weeyiye..???!!!
-Ninkan inaga dhaafoo hebel adu maxaad dhagaysataa..??!!!
-Ma ninkanaad wax waydiin, waar anaad ila yaabanayde, isna aduu kula yaabi oo ku odhan maxalibaad tahay..!!! ninka dhagtiisu maraykan bay taalaa..!!!
Sadexda nin ee midba midka kale la yaabanyahay, dookhiisana liidaayo waxaa ag fadhiya mid intoodaba la yaaban, niyaduu intaa isna ka talamayaa oo leeyahay rabow magantaa, waxaan maraynaa heer xaaraanta la iskugu faano oo anaa kaaga wacan la is yidhaa..!!!!
Warkaa halkaa inoo dhig..!!!
-Suuuus hoos u hadal…
-Hee maxaad ii aamusiisay..??!!!
-Kan inala fadhiyay mataqaan, waa qoladii surwaal dheerta..!!
-Yaaaa, maan moodaynbee…!!!
-Nimanka ileen lagama waayo basaase, kani meel ay mujaahidiin joogto lagama waayo, dhagtuu u dhigaa warkoogana wuu gudbiyaa..!!!
-Subxaana Allaaah, ma qaacidnimadii (jihad ka fadhiisigii) ayuu taana ku darsaday..!!!! horta kii bay walaal ahaayeen saw maaha..??!!!
-Kii qolyahan diinta dalxiiskaa haysta ee siday u wareegayeen kabuhu ka dhamaadeen ku jiray..!!!
-Haaaa ma hebel, Maya waa ilma adeer meel ku wada koray.
Halkii laga hoyay, kii laga sirqarsanaayay ayaa hadalka ugu bilaabay kii la hadal haayay, kuwii ayaa caawa maqaayadii yartii aad jeclayd wada fadhinay..!!
-Ma kuwii saaxada idinka xidhay..??!!
-Ma anaga, xagay nagaga xidheen argagixisadu qoladay ka soo hoos baxeeen ayay ka xidheene..!!!
-Waaar waxba isma dhaantaan idinka iyo kuwasiye, hadaanay yaryarku idinka hor dhaqaaqin labadiinuba waxaad rabteen inaad dalka iyo dadka qabsataan…!!!
-Oo ileen waad liidataaye, inaad sidaan dhaantaan u qabee, yaa ku yidhi wadaadku siyaasada iyo xukunku waa ka reebanyahay..??!! Takale anagu sida surwaal gaabta ma nihine xadaaradaan la haysanaa..!!! Kolay adu waxba ka garan maysid arimahaase iska seexo..!!!
Waa arkaa in aanu wali warku kuu dhaadhicin..!!! Iska dhaaf taa.
-Yaan inala gaclay..??!!
-Aaah.. Igadaa, iska hayso marti qaadka, ma jeclayn in aan hebla meherkeda ka maqnaadee, reerkaas meel ma wada fadhiisan karno.
-Waar maxaa ka galay ma aday ku guursanayaan.. kaalay gabadha nala bixi.
-Waar xalay waxay lahaayeen ma maqlaysay..??!! Wixii dagaalkii ay naga galeen oo dhan intaan liqanay ayay maantana in ay magaca dawlada si waligood noogu haystaaan awgeed uga soo horjeeteen ninkaan soo sharaxanay..!!! kulahaa reer hebel caasimada meeyar ka noqon maayaan..!!!
-Waar reerku waa cadow eh, dee ma xiligan aan joognaa wiil gabadh loo diidi karaa..??!! jiilkan danbe warkaaba mahaanba.??!!!
Inaas uun kuma koobna arimaha kala geeyay bulsho gaar ahaana bulshadeena lakiin miyaad ila yaabi hadaan ku idhaa intaas talo ee kala duwan islana wada yaaban midkoodna lama yaabani, waa gar in aad i waydiiso waayo.. sabab..??!!!
Aqoonta sayniska(science) oo ah aqoonta kali ee aqoonaha kala duwan ee aadamuhu yaqaan ku fadhida xeer wayn oo layidhaa itu oo itaabsii, waxa lagu cadeeyay ilaa hada 10,000,000 “toban milyan” oo midan dunideenan ka jiraan.
Muuqaalada (sawirada) laba nooc ayaa loo midabeeyaa, midkood waa Madow iyo Cadaan midna waa midabo badan yahay, sidaan anu u arkona maskaxda aadamuhuna aduunyada waxay u aragtaa labadaa nooc midkood.
Aadamaha badidood waxay ay dunidan u arkaan nooca koobaad oo ah Madow iyo Cadaan, dadkaynu hore u soo aqrinay hadal wadagooduna dhamaantood waa noocan, waxa uu rabaa in aad 100% la mid noqoto hadii kale 100% waad ka soo hor jeedo.
Hadaad reer hebel tahay, agtiisa danbiilaad tahay waayo, ku aad hayb wadaagtaan ayay is hayaan ama khati hore gaf ka galay..!!! sidaa darteed dad xun baad tihiin agtiisa, marwalba isga waxaad u tihiin madow, sawir cad ood leedihiin hore uma galin maskaxdiisa hadan lagama rajo qabo in uu galo.
Sidoo kale hadaanad wadaadka kooxdisa tahay, nin kaa wanaagsan ma jiro, hadalkaga maxaa ka macaan, waaba xikmad, allah maxaa kaa dulqad badan, sidaad diinta u taqaan, iyo sida aad kooxaha kale iskaga dhiciso, noocaagaba lama abuurin, hooyo adoo kale in ay dhasho lagama yaabo, waaka markiiba kuugu magac daray imam hebel oo quruun mootan, haduusan jano kuuba balan qadin baa u roon yahay..!!!
Aad bay u yartahay, wax la tirshana maaha bulshadeena marka laga hadlaayo dadka tolo-raran yeelan kara, maxaan uga jeedaa talo-raran..??!!!
Heesaha cusub ayaad dhagaysataa, taasi maaha in aad dookh liidato, maahana in aan kaa dookh wanaagsanahay, yarkan agteena fadhiyaa waxa uu dhagaysataa hees galbeed, taas kama dhigna in uu nolosha ka dhacsanyahay. Gabigeenba hadaan meel isdhigno inteena muusiga u dhag raaricinaa wadaadkii ka cawdu-bilaysanaayay maaha nin lii
ta, waxaan ku jirno oo dhan waxa uu u qabaa in ay xaraantii nabi Muxamed NNKH xarimay ay tahay.
Marwalba laba qodob ha iloobin,
Midha hore in aad qofka iyo fikirkiisa kala saarto, isagu isma badalaayo lakiin fakarkiisa, dookhiisa iwm way isbadeli karaan.
Midha kale qofka in aad gardaro ku qirto iyo in aad ku canaanato kala saar, haa way dhacdaa in aad qofka ku qanacsantahay in uu khalad ku jiro, fikir khaldan qabo, fal qaloocan samaynaayo hadana aanad ku canaan waydo, ileen garan maysid hadii duruuftiisa lagu geeyo wax aad yeeli lahayd.!!!
Gabogabadii aadamuhu in uu gaxaaga jiro iyo in uu xag ka soo hor jeeda jiro waxa u dhaxaysa in uu meel dhexe joogo, kuwa xaga kaa soo hor jeda jiraana ma wada madooba, waxa jira cadaan madow sawaabiya, ku ka yara jaamudsan, mid isagu madawga xiga, waxan ku sii xiga madow cadaan xiga, Sidaas uun u wad, sidoo kale dhankaaga kuwa jiraana jaranjarooyin ayay leeyihin, ku darso barta dhexe lafteedu way jaranjaro badantahay, hadaynaba ahayn mida ugu jaran-jarooyin badan.
Ugu danbayntii markasta oo midabada aad dunida ku arkaysaa kordhaanba waxaa kordha fahanka aad dunida fahmayso, markasta oo aad soo koobtana noloshaada ayaad soo kobaysaa.!!
Kama danbaytiina ogow qof ahaan aadamaha wax ma dheerid, gar uma lihid in aad maxkamada wareegta adu isku magacawdo ood cidkasta adu intaad eedayso, garsoorena u noqoto oo xukun ku rido, isla markaana aad isla adigu fuliso xukunkaas.
Xaawa ubadkeedu gabi ahaan way simanyihiin adna way kula simanyihiin, nin walbana duruuftiisa ayaa halka uu joogo gaysay, iswaydaaran doontaaan Allah baa garan.
Fikir, Fikrad, Imisa Midab, Imisa Midable Ayaad Tahay, Imisa Wajiile, Laba Labayn, Laba Shaqsiyadood, Laba Wajiilayn, Laba Wajiile, Musuq Maasuq, Qof Laba Ah, Shaqsiyad
Previous ILEEN ILAAHYO KALE AYAYNU LEENAHAY..!!!
Next FALANQAYN: SHEEKO FANEEDA SADDEX NAFOOD